Ikhaya STARS E-EUROPE UHamza Choudhury Ingane Yendaba Yengane Plus Untold Biography Facts
Amakhadi ezemidlaloOkunye kanye no-Instagram
I-LB inikeza iNdaba ephelele ye-Football Genius eyaziwa kakhulu ngegama elithi "Choudhury". Indaba yethu yeHamza Choudhury Childhood kanye ne-Untold Biography Facts ikulethela i-akhawunti ephelele yezenzakalo eziphawulekayo kusukela esikhathini sokubantwana kuze kube yimanje. Ukuhlaziywa kuhilela ukuphila kwakhe kwasekuqaleni, imvelaphi yomndeni, indaba yokuphila ngaphambi kokudumo, ukuphakama kwendabuko, ubuhlobo nokuphila komuntu siqu njll.
Yebo, wonke umuntu uyazi ukuthi ungumdlali ovikelayo onamandla, owodwa owenza ama-afro akhethekile Marouane Fellaini's umzamo ubheka amateur. Kodwa-ke, bambalwa kuphela abheka i-Biography kaHamza Choudhury okuthakazelisayo kakhulu. Manje ngaphandle kokuqhubeka kwe-ado, ake siqale.
UHamza Choudhury Ingane Yabantwana Ingane Plus Untold Biography Facts- Isiqalo sokuphila
UHamza Dewan Choudhury wazalwa ngosuku lwe-1st ngo-Okthoba 1997 kunina, uRafia Dewan Chowdhury eLoughborough, idolobha laseLeicestershire United Kingdom. Ngaphansi kwesithombe sikaHamza nomama wakhe uRafia noDewan Murshid Chowdhury, ngokusho komthombo kukhona izihlobo ngenxa yesiko laseBangladesh.
Abazali baka-Hamza Choudhury-Ubaba (uDewan Murshid) noMama (Rafia). Isikweletu ku EzemidlaloOkunjalo
Ngokuqondene nomsuka wakhe, uHamza ungowokuzalwa okuvela eCaribbean nase-Bangladeshi. Ngokuvumelana ne EzemidlaloOkunjalo, umama wakhe uvela eHabiganj eBangladesh ngenkathi ubaba wakhe wangempela evela ezweni laseCaribbean laseGrnadian.
UHamza wabonga abazali bakhe base-Asia naseCaribbean kubazali abavela emlandweni ophakathi. Ngokusho komunye wabazala wakhe owake wabiza igama lakhe, umama kaHamza waqala ukubopha umkhonto wakhe nomyeni wakhe waseCaribbean (ubaba kaChoudhury) ngaphambi kokushada noDewan Murshid Chowdhury ngemuva kokushada. UHamza wahlala nomama wakhe, uRafia, abafowabo nodadewabo e-United Kingdom.
Isikweletu ku EzemidlaloOkunjalo
"Nakuba ngikhuliswe emndenini wase-Asia, kodwa nginegazi laseCaribbean kimi njengoba ubaba wami evela eGrenada. Sinomndeni omkhulu. " Uthi uHamza Choudhury.
UHamza Choudhury Ingane Yabantwana Ingane Plus Untold Biography Facts- Ukuphila Okuqala Kwomsebenzi
Ekuqaleni, wonke uHamza wayefuna ukuthi abe ngumdlali wezemidlalo. Uthando lwakhe lwebhola limbonile ebhalisa iqembu leqembu elisha laseLeicester FC elimnike isiteji ukubeka isisekelo esihle somsebenzi.
U-Hamza Choudhury osemncane e-Leicester City Academy (Isikweletu ku-Instagram)
Njengoba uHamza Choudhury eqhubeka ekhulile, wazibonela ngokuphila kahle ne-Academy. Eminyakeni embalwa yokuqala yomsebenzi wakhe wambona waba uhlobo lwezintombi ezingazi lutho ngaphandle kokubonisa amaqhinga anamandla nebhola. Njengoba kuboniswe kule vidiyo ngezansi, uHamza Choudhury osemusha wayeyilungu lomdlali owashukumisa abaphikisi besikhathi esidlule njengabazange babe khona
UHamza Choudhury Ingane Yabantwana Ingane Plus Untold Biography Facts- Umgwaqo oDumela
UHamza Choudhury ngesikhathi eseneminyaka eyishumi nambili wathola ukuhweba kwebhola "isenzo sokubhekana". Ikhono lakhe lokubamba iqhaza elimangalisayo lenza ukuthi kube ngcono kuwo wonke amaqembu e-Leicester. Ukuqaphela indlela eyinhloko yokubhekana nayo yabona uHamza ethuthuka futhi ehlolwe yizinkampani eziningi eziphezulu zaseNgilandi.
Ukubhekana nobuciko obulahlekile eLeicester academy football, kodwa uHamza waletha futhi ugcine isiko esidala sihamba neLeicester Academy. Njenge Phill Jones, wayenguhlobo lwebhola lomgibeli owayezophonsa zonke izingxenye zomzimba wakhe. Bona ividiyo.
U-Hamza Choudhury uzinikezele ngokushesha ekuthuthukiseni iqembu lezemidlalo leLeicester ngesikhathi eneminyaka engu-16. Kamuva, waba induna ehlonishwe kahle ohola abalandeli bakhe ukuba banqobe emidlalweni.
UHamza Choudhury akakwazanga ukuphuma eLeicester idolobha laseFree FC ebebephethe ukuzingela kwe-2015-2016 Premier League. Ngeshwa, akakwazanga ukuncintisana nokwazisa izinkanyezi (Kante futhi Amanzi okuphuza) ababengaphansi kwePirates league trophy regulars. UHamza wanquma ukujoyina uBurton Albion ngenkokhelo. Ngesikhathi eseBurton, waqhubeka nokuhweba kwakhe.
Uthi bewazi?… UHelza Choudhury uphumelele ekubolekeni isikweletu semali eyabangela ukunyuswa kweBurton Albion ku-Championship.
UHamza Choudhury Ingane Yabantwana Ingane Plus Untold Biography Facts- Ukuphakama Ekudumeni
Ngomhla ka-28 November 2017, uHamza emuva kokubuyela kwakhe wenza i-Premier League yakhe debut, irekhodi elimenze waba ngumdlali wokuqala wezinyawo zaseBangladeshi ukudlala ku-Premier League.
Kusukela ngoDisemba 2018, uHamza Choudhury waqala ukudlala indima ebalulekile ngezinye izinto ezinhle kakhulu ezashintsha isiphetho seLeicester City football. Leli qembu liye labonakala lihola iqembu lakhe ngokuphula uManchester City 2018 / 2019 ukugijima okungapheli nokushaya iBellan. Umqeqeshi weLeicester's academy wasebenzisa ukusebenza kwakhe kulezi zinqola ukuzimisela njengeqembu lokuqala elivamile. Kwakuyiqiniso, ukushintshwa okubushelelezi. Bonke abanye, njengoba bekusho, ngumlando.
UHamza Choudhury Ingane Yabantwana Ingane Plus Untold Biography Facts- Ukuphila Ubudlelwano
Ngemuva we-footballer ophumelelayo kusukela efa laseBangladeshi, kukhona inqola evumayo kumuntu ka-Olivia ofanekiselwa ngezansi ngothando lomphefumulo wakhe.
UHamza Choudhury no-Olivia Fountain (Credit kuya Instagram)
Ngokusho kukaManchesterEveningNews bobabili abathandi baneminyaka efanayo kanye nothando lokugubha izinsuku zabo zokuzalwa ndawonye. U-Olivia ungumklami wangaphakathi ophethe amaklayenti amaningi eLeicester.
Bobabili u-Olivia, uHamza nendodakazi yabo ethandekayo baphila impilo encane e-Aylestone, emadolobheni aseLeicester 13 ngamakhilomitha kude neMakhosi Power Stadium. Yayikhaya elinombongolo othakazelisayo.
U-Hamza Choudhury ubhekene neNdodakazi neDonsi (Isikweletu ku-Instagram)
UHamza Choudhury Ingane Yabantwana Ingane Plus Untold Biography Facts- Ukuphila Personal
Ukukwazi ukuphila komuntu siqu kaHamza Choudhury kuzokusiza ukuthi uthole isithombe esiphelele kuye. Uma kukhona into eyodwa uHamza Choudhury ayithandayo njengebhola, ligibela ikamela, umsebenzi othanda ukuwenza lapho ehambela izwe lakubo eBangladesh.
UHamza Choudhury uthatha i-pos ngekamela (Isikweletu ku-Instagram)
Abadlali bebhola, njengathi sonke, bathanda izifuywayo zabo kanye neChoudhury akuyona into ehlukile. Isisho sokuthi akukho ubuqotho obushiywe emdlalweni wanamuhla ngokuqinisekile ayizicabangeli ubudlelwane obubekwa phakathi kweChoudhury nenja yakhe.
UHamza Choudhury ubhekana nenja yakhe (Credit kuya Instagram)
UHamza Choudhury Ingane Yabantwana Ingane Plus Untold Biography Facts- Ukuphila Komndeni
Ekwahlulela isithombe esivela kuChoudhury nomkhulu wakhe, uzokwazi ukuqagela kalula isizinda sakhe somndeni.
Ngokufanelekile, i-Choudhury yakhulela emlandweni womndeni owodwa ophansi wezinga eliphezulu. Lokhu kwakungaphambi kokuba izimali zebhola lezinyawo ziphakanyise indlu yakhe. Namuhla, amalungu omndeni wakhe waseBangladesh futhi ikakhulukazi, abantu baseBrithani-Bangladeshi bazizwa bebusisiwe ngokuba neChoudhury empilweni yabo. Kuqinisekile ukuthi uHamza ubhekwa njengephayona labadlali basezindaweni zase-Asia.
Okungenani izinyanga ezimbili ngonyaka, uHamza wenza isikhathi sokuvakashela iBangladesh njengoba unina njengamanje ehlala emzini wabo eHabiganj.
Uthanda ukuzibonakalisa ngesizinda sakhe sase-Asia. Ekhuluma ngalokho, wake wake wathi;
'Angizizwa ngicindezelekile ngokuba ngumchwepheshe ovela emlandweni womndeni wase-Asia. Umndeni wami ube usizo olukhulu ngokuzethemba kwami. Bangitshela ukuthi ngijabulele ibhola lami. Uma ngiphenduka kusasa futhi ngithi angifuni ukudlala ibhola nanoma bangabe bangisekela njalo.
UHamza Choudhury Ingane Yabantwana Ingane Plus Untold Biography Facts- LifeStyle
UHamza Choudhury akayena uhlobo lomdlali webhola lezinyawo ohlala kwiLavish Lifestyle ebonakala kalula ngezimoto eziningi ezihle kakhulu. Inani eliyinkimbinkimbi yezimali zebhola lezinyawo liye lathola kuye ukukhetha ukuthenga iMercedes-Benz.
Noma kunjalo, uHamza akazange aqalise indlela yokuphila umuntu aqala ukuyibona kumafilimu aseHollywood kuphela. Njengoba kubonisiwe ekuqaleni, yena kanye nomndeni wakhe bahlala ekhaya lakhe lokuzalwa emadolobheni aseLeicester.
QAPHELA QAPHELA: Siyabonga ngokufunda indaba yethu yeHamza Choudhury Childhood kanye ne-Untold Biography Facts. Kuzo LifeBogger, silwela ukunemba nokulingana. Uma uthola into engabonakali kahle, sicela wabelane nathi ngokuphawula ngezansi. Sizohlala sibazisa futhi sihlonipha imibono yakho.